कामदार अ’भाव पछि मलेसियाले नेपाली लैजाने, मलेसियाले चाल्यो यस्तो कदम ! - Thulo khabar
कामदार अ’भाव पछि मलेसियाले नेपाली लैजाने, मलेसियाले चाल्यो यस्तो कदम !
क्वालालम्पुर : तीन वर्षअघि उत्पन्न सि’ण्डिकेट वि’वादका कारण रोकिएको मलेसियाको रोजगारी खुलेको छ । २०७५ सालमा सिण्डि’केट विवादपछि म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन सकेका छैनन् ।
दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै को’रोना नि’यन्त्रणका लागि निश्चित मापद’ण्ड अध्यागमन कार्यालयको माइट्राभल पास/माई इन्ट्री,
मलेसियाको वैधा’निक भिसा, विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएको हुनुपर्ने, कोभिडको परीक्षण गरिएको नेगेटि’भ रिपोर्ट उड्नुभन्दा ४८ घण्टा
अगाडि पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड राखेको छ । यसैगरी, मलेसिया पुगेपछि तोकिए अनुसार क्वा’रेन्टाइन बस्नुपर्नेछ । भिसा लगायतका विषयमा कुनै कुरा बुझ्नु परेमा वेभसा’इटमा सूचना हेर्न सकिने दूतावासले जनाएकाे छ ।